international oli hydropower death kp Girl Death nepal politics koshi election
वाइफाइ चलेन ? यी उपायहरु अपनाउनुहोस्
एजेन्सी: घरमा इन्टरनेट जोडेपनि घरको सबै कोठामा वाइफाइ नपुगेर चिन्तित हुनुहुन्छ ? त्यस्तो चिन्ताले सताएको छ भने अव मुक्त हुनुहोस् । किनकी वाईफाईको सिग्नल घरका सबै ठाउँमा राम्रोसँग टिप्ने बनाउन भने सकिन्छ ।
यसका लागि सबैभन्दा पहिले बिजुलीमा कनेक्ट गरेर रिसेट बटनलाई झण्डै तीस सेकेण्डसम्म थिच्नु पर्छ । त्यसपछि राउटर रिसेट हुन्छ । यसपछि ३० सेकेण्डकालागि बिजुलीसँगको कनेक्सन हटाएर बटनलाई थिच्नु पर्छ । त्यसपछि राउटरलाई बिजुलीसँग फेरि जोडेर रिसेट बटनलाई फेरि ३० सेकेण्डसम्म थिच्नुपर्छ ।